भारतमा देखियो निपा भाइरस, कति जोखिममा नेपाल ? - स्वास्थ्य - कान्तिपुर समाचार
भाद्र २५, २०७८ बुनु थारु
काठमाडौँ — छिमेकी राष्ट्र भारतको केरलमा निपा भाइरसको संक्रमण पुष्टिसँगै नेपाल पनि जोखिममा देखिएको छ । सेप्टेम्बर ५ मा निपा भाइरसबाट १२ वर्षीय एक बालकको मृत्यु भइसकेको छ । नेपाल पनि भाइरसको जोखिममा हुन सक्ने विज्ञहरुले बताएका छन् ।
के हो निपा भाइरस?
विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार निपा भाइरस जुनोटिक भाइरस हो जुन जनावरबाट मानिसमा सर्ने गर्दछ । यो भाइरस दूषित खाना र मानिसबाट मानिसमा सिधै पनि सर्न सक्छ । भाइरबाट संक्रमित जनावर जस्तै चमेरो तथा सुँगुरको थुक र पिसाबबाट मानिसमा सर्न सक्छ ।
भारतमा सन् २००१ को जनवरी–फेब्रुअरीमा पश्चिम बंगालको सिलिगुडीमा पहिलोपटक यो भाइस देखिएको थियो । त्यतिबेला ६६ जनामा संक्रमण देखिएको थियो । त्यसपछि सन् २००७ मा पनि यो भाइरस देखियो । सन् २०१८ मा पुन: यो भाइरस देखिएको थियो जसमा १७ जनाको मृत्यु भएको थियो ।
बंग्लादेशमा भने सन् २००१ मा यो भाइरस देखिएको थियो ।
निपा भाइरसका लक्षण के-के हुन् ?
निपा भाइरसका लक्षणविहीनदेखि सामान्य तथा गम्भीर खालका लक्षणहरु हुन सक्छन् । सुरुमा यसले मस्तिष्क सुनिन्छ जसलाई इन्सेफ्लाइटिस पनि भनिन्छ । यसले मृत्यु पनि गराउन सक्छ ।
नेपालमा यसको जोखिम कति? यसो भन्छन् विज्ञ?
निपा भाइरसको हालसम्म कुनै पनि औषधि तथा खोप उपलब्ध भइसकेको छैन । त्यसैले जनचेतना एकदम आवश्यक देखिन्छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार ४० देखि ७५ प्रतिशत केसमा मृत्यु हुन सक्छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनले यो रोगलाई प्राथमिकतामा पर्ने रोग भनेर बताएको छ ।
विज्ञहरुका अनुसार यदि यो भाइरसको आउटब्रेकको शंका गरिएको छ भने त्यो ठाउँलाई तुरुन्त क्वारेन्टाइन गरिहाल्नुपर्छ । नेपालमा भने यो भाइरस परीक्षण गर्ने सुविधाहरु उपलब्ध भइसकेका छैनन् । टेकुस्थित राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा भने यो परीक्षण सम्भव छ ।
हालसम्म नेपालमा निपा भाइरसका केस देखिएका छैनन् । शुक्रराज ट्रोपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका रिसर्च युनिटका संयोजक तथा संक्रामक रोग विशेषज्ञ डा शेरबहादुर पुनका अनुसार नेपालमा यो भाइरस पुष्टि नभएतापनि पनि जोखिममा रहेको बताउँछन् । डा. पुन भन्छन्–‘ भाइरस फैलाउने खालको चमेरोहरु नेपालमा पनि पाइन्छन् । यो भाइरसको परीक्षण नगरिएको हो वा के हो थाहा भएन अहिलेसम्म पुष्टि भएका केसहरु देखिएका छैनन् ।’ उनले यो भाइरस अति संक्रामक भएको र मृत्युको जोखिम पनि बढी रहेको भन्दै सरकार चनाखो रहनुपर्ने बताए ।
डा. पुनले यो भाइरस उच्च संक्रामकसँगै मृत्युको जोखिम गराउने भएकाले सरकार चनाखो रहनुपर्ने बताए । ‘पहिला पनि भारतमा देखिएको हो । यो भाइरसको प्रभाव एकदम छिटो हुन्छ अचेत नै बनाउने अनि मृत्यु नै हुने हुन्छ । हाम्रो सिमाना पनि खुल्ला छ । त्यसमाथि यो सार्ने चमेरो पनि नेपालमा पाइन्छन्। कोरोना मात्र होइन मौसमी संक्रामक रोगका लागि पनि सरकारले ध्यान दिनुपर्छ । किनभने धेरैजसो संक्रामक रोग कोरोनासँग मिल्दोजुल्दो छन् ,’ उनले भने ।
इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा (ईडीसीडी)ले भारतको केरलमा निपा भाइरसको संक्रमण बढिरहेकाले सबैले सतर्कता अपनाउनुपर्ने आग्रह गरेको छ ।
ईडीसीडीका निर्देशकसमेत रहेका स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. कृष्णप्रसाद पौडेलले ७ वटै प्रदेशमा निपा भाइरसका लक्षण लिएर स्वास्थ्य संस्थामा आउनेको विस्तृत विवरण लिइ प्रयोगलाहरुको समन्वयमा नमुन संकलन गरी राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकुमा यथाशिघ्र पठाउन आग्रह गरेका छन् ।
उनले रोगको यकिन निदान नहुँदै वा तीव्र रुपमा बिरामीको स्वास्थ्य अवस्था बिग्रँदै गएका वा मृत्यु भएका बिरामीहरुको समयमै अनुसन्धान गर्न सबै अस्पताललाई पत्राचार गरिएको बताएका छन् ।
प्रयोगशालाकी निर्देशक डा. रुणा झाले यो भाइरस परीक्षण गर्नका लागि विश्व स्वास्थ्य संगठनसँग स्टकमा राख्नको लागि रिएजेन्ट मगाइएको बताइन् ।
डा‍. झाका अनुसार यो भाइरस परीक्षणका लागि पीसीआर मेसिनबाट नै हुन्छ तर यसका लागि छुट्टै किसिमको रिएजेन्ट आवश्यक हुन्छन् । ‘रिएजेन्टको म्याद गुज्रिने हुन्छ । कुनै ६ महिना वा कुनै १ वर्षसम्म काम लाग्छ । एकपटक गरियो त्यसपछि गरिएन भन्ने त्यो काम लाग्दैन । भाइरस देखिएपछि आवश्यकता हुन्छ ,’ उनले भनिन् ।
डा. झाले संगठनबाट परीक्षणका लागि छिट्टै नै रिएजेन्ट आइपुग्ने बताइन् ।
प्रकाशित : भाद्र २५, २०७८ १९:३१
काठमाडौँ — सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरुको बैठक प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा जारी छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमसीसी उपाध्यक्ष फातिमा सुमारसहितको टोलीसँग भेटेलगत्तै गठबन्धनका शीर्ष नेताहरुको बैठक बसेको हो । बैठकमा सरकार र संसद सञ्चालन, मन्त्रिपरिषद् विस्तार तथा संसदबाट एमसीसी अनुमोदन गर्ने सम्बन्धमा सहमतिका लागि छलफल हुने प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।
बैठकमा कांग्रेस सभापति एवम् प्रधानमन्त्री देउवा, महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेकपा एसबाट अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, नेताहरु विरोध खतिवडा र राजेन्द्र पाण्डे, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र राष्ट्रिय जनमोर्चाकी उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेल लगायत नेताहरु सहभागी छन् ।
यसअघि शुक्रबार बिहान पनि गठबन्धनका शीर्ष नेताहरुको बैठक बसेको थियो । बैठमा नेताहरुले मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा अब ढिला गर्न नहुने नेताहरुको जोड थियो भने प्रधानमन्त्री देउवाले दलहरुलाई मन्त्रीको नाम छिटो दिन आग्रह गरेका थिए ।
प्रकाशित : भाद्र २५, २०७८ १९:२४